Dowladda Iran oo Wado u noqotay Dhuxusha laga dhoofiyo Soomaaliya. - Warka gudaha Somaliya - Local News in Somalia
Home WARKA GUDAHA Dowladda Iran oo Wado u noqotay Dhuxusha laga dhoofiyo Soomaaliya.
Dowladda Iran oo Wado u noqotay Dhuxusha laga dhoofiyo Soomaaliya.
Muqdisho-Shabakadaha Dambiyadda ayaa Iran u isticmaalayaa Bar ay marto Dhuxusha Soomaaliya ee sida sharcidarada ah loo dhoofiyo taas oo Al-shabaab ay Malaayiin doolar ka sameeyaan canshuur ahaan, sida lagu sheegay Warbixin uu Qoray Guddiga la soconka Cuneqabateynta Soomaaliya oo ay aragtay Reuters.
Warbixintu waxay sheegtay in tan iyo Bishii march Maraakiib isiticmaaleeysa Aqoonsiyo khaldan sida , Ivory Coast iyo Ghana ay ku xirteen Dekadaha Iran iyadoo dhuxushana lagu shubay Jawaanno Cad oo “Badeecadda Iran ay dusha uga qorantahay.
“Jawaanadda Dhuxusha ah waxaa lagu qaadaa doomo yar-yar oo watta calanka Iran waxana loo dhoofiyaa Dekedda Al-Xamariya ee Imaaraadka carabta iyagoo doomahaasi isticmaalaaya aqoonsi khaldan oo ah in dhuxusha Iran lagu sameeyay” ay kooxda la socodka Cune qabateynta Soomaaliya warbixintooda ku xuseen.
Dalka Iran ayey Warbxintu sheegtay in uu marin u noqday maraakiibta dhuxusha sida uuna jibiyay mamnuucistii QM ee dhoofinta dhuxusha Soomaaliya kadib markii Cuman ay adkeeysay Hanaanka Kastamyadeeda.
Warbixintu waxay ku qiyaastay in Imaraadka Carabtu uu Dhuxusha Somaaliya ku iibsaday 150 milion oo dollar muddo sanad ah, Imaraadkana dhuxusha waxaa aad loogu isticmaalaa Karista iyo in lagu shido dhalooyinka Shiishadda laga cabo.
Waxaa Qiyaastaan ku xusan in 3 million oo jawaan Soomaaliya laga dhoofiyay Sanadkii tagay, Al-shabaab waxay wali dhuxushu u tahay il dhaqaale waxayna ka heleeen ugu yaraan 7.5 million oo dollar sida warbixinta lagu sheegay.
Warkaan ay Daabacday Reuters wali kama aysan hadlin dalalka Imaraadka carabta iyo Iran,Warbixinta kooxda Monitoring group waxaa ay shaaca ka qaaday in Barta koontrool ee Al-shabaab ugu faa’idada badan ay ku taalo meel 160 KM Woqooyi Galbeed kaga began caasimadda Muqdisho oo ah wadada isku xirta Magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo.
Dagaalame Al-shabaab kasoo goostay ayey kooxdu kasoo xigatay in Al-shabaab ay Bartaas control ka helaan ku dhawaad $30,000 maalintii-taas oo Sanadkii ka dhigan 10 million oo dollar.
QM waxay dhoofinta dhuxusha Soomaaliya mamnuucday sanadkii 2012kii kadib markii la ogaaday in Malaayiin dollar ay A-shabaab ay ka sameeyaan canshuurta dhuxusha.